warkii.com » Meera Mitun”Mustaqbalkeyga Telugu waxaa bur-burisay Trisha Krishnaan” isqaraabeysiga koonfur xitaa waa ka jiraa!!
Feysal Cali Waraabe oo si cajiib ah uga hadlay shirkii beesha Mudullood ee Muqdisho
Maxbuuskii Shabaabka ee ku baxsady weerarkii xabsiga dhexe oo xog laga helay
Guddoomiyaha ganacstada khaadka Kenya oo shaaciyey cidda leh go’aanka looga mamnuucay Soomaaliya
Tirada dhimashada Xabsiga Dhexe oo aad u korortay iyo wararkii ugu dambeeyey
Maxey dalalka Khaliijka kaga dhigan tahay soo laabashada Donald Trump?
Meera Mitun”Mustaqbalkeyga Telugu waxaa bur-burisay Trisha Krishnaan” isqaraabeysiga koonfur xitaa waa ka jiraa!!
Trisha Krishnaan waa mid kamid ah atiriishooyinka ugu caansan koonfurta India ilaa bilawgii qarnigaan ayee xidigtaan fanka hindiya kasoo muuqaneysay doorar kala duwa oo xiiso leh ayee sameysay intee howshan ku guda jirtay.
Dhanka kale Meera Mitun iyadana waa atiriisho caan ah balse sida Trisha oo kale awood umalahan waxaana maqaam sareyso Trisha balse labadan atiriisho colaad ayaa ka dhaxeyso mudo dheer waana arin soo socday iyo xifaaltan dhanka shaqada ah.
Meera ayaa muuqaal iska soo duubtay waxayna sheegtay in Trisha awood u sheegatay shaqadeeda Telugu-na u diiday waxay tiri Meera oo hadleysa,”maadama aan Trisha kaga fiicnaaday dhanka Fashion-ka iyo Style-ka waxay go’aansatay inee dhanka aflaamta iga soo weerarto.”
“Trisha waxay la heshiisay maafiyada iyo burcada ugu weyn Telugu kadibna muuqaaladeyda filimka Yennai Arindhal ayaa la faaf reebay oo wax badan laga jaray intaas kuma eka Trisha waxay si awood kudheehan iiga saartay Rajni Filimkiisa Petta marka Trisha waa qofta bur burisay shaqadeyda Telugu.”
Is qaraabeysiga iyo awood isku sheegashada meel walba wey ka jiraa markaana siraha iyo fadeexooyinka koonfur India ayaa banaanka imaanayaan waxaana u sabab ah Bollywoodka iyo kiiska Sushant oo India oodhan saameeyay.
Feysal Cali Waraabe oo si cajiib ah uga hadlay shirkii beesha Mudullood ee MuqdishoAugust 11, 2020
Maxbuuskii Shabaabka ee ku baxsady weerarkii xabsiga dhexe oo xog laga helayAugust 11, 2020
Guddoomiyaha ganacstada khaadka Kenya oo shaaciyey cidda leh go’aanka looga mamnuucay SoomaaliyaAugust 11, 2020
Tirada dhimashada Xabsiga Dhexe oo aad u korortay iyo wararkii ugu dambeeyeyAugust 11, 2020
Maxey dalalka Khaliijka kaga dhigan tahay soo laabashada Donald Trump?August 11, 2020
Xog: Shaqada Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo hakad gashay + SababtaAugust 11, 2020
Aqriso Magacyada: Guddi ka kooban 6 xubnood oo loo saaray weerarkii X/DhexeAugust 11, 2020
CC Shakuur oo sheegay in Shabaab hubka loo geliyey xabsiga dhexe iyo ‘cidda ka dambeysay’ (Daawo)August 11, 2020
CC Shakuur: Shabaab hubka waa loo geliyey xabsiga dhexe waana qorshe NISAAugust 11, 2020
Xildhibaan si qarsoodi ah ku tegtay suuqa Bakaaraha, balse kadib maxaa dhacay?August 11, 2020